विश्व किर्तिमानी रकममा एलिसन एनफिल्ड आउने पक्का – Khel Dainik
विश्व किर्तिमानी रकममा एलिसन एनफिल्ड आउने पक्का
एजेन्सी । लिभरपुलले ब्राजिलियन गोलरक्षक एलिसनका लागि विश्वकिर्तिमानी ७३ मिलियन युरो (६६ मिलियन पाउण्ड) मा इटालियन क्लब एएस रोमासँग सहमति बनाएको छ ।
२५ बर्षिय एलिसन बुधबार राती नै लिभरपुलका लागि प्रस्थान गरेका छन् र उनले छिटै मेडिकल पनि पूरा गर्ने बताइएको छ । साथै एलिसनले लिभरपुलसँग ६ बर्षको अनुबन्धपत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नेछन् ।
Liverpool sign Roma goalkeeper Alisson for world-record £66.9m fee. Story: @FabrizioRomano https://t.co/P6OKcmWll1 pic.twitter.com/11Mn13Pb7u
— Guardian sport (@guardian_sport) July 18, 2018
लिभरपुलले मंगलबार एलिसनका लागि ७० मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा १० मिलियन युरो बोनस पनि सामेल थियो । तर रोमाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि अहिले दुवै क्लबबीच ७३ मिलियन युरोको सहमति बनेको छ । जसमा ६३ मिलियन युरो आधारभूत रकम रहेको छ भने १० मिलियन युरो बोनस रकम रहेको छ ।
यो स्थानान्तरणमा सहमति बनेसँगै एलिसन विश्वकै सबैभन्दा महँगा गोलरक्षक बनेका छन् । यसअघि युभेन्ट्सले जियानलुईजी बुफोनका लागि सन् २००१ मा ५३ मिलियन युरो खर्चिएको थियो । त्यस्तै म्यानचेष्टर सिटीले गत सिजन एडरसनलाई अनुबन्ध गर्न बेनफिकालाई ४० मिलियन युरो ट्रान्सफर मूल्य तिरेको थियो ।
Liverpool will pay €63M + €10M add ons for Alisson to AS Roma. Possible medicals tomorrow. ✅ #LFC #Liverpool
एलिसनलाई अनुबन्ध गर्न लिभरपलमाथि चेल्सीले पनि दबाब दिईरहेको थियो । यद्यपि रोमासँगको राम्रो सम्बन्धका कारण यो डीललाई लिभरपुलले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । साथै लिभरपुलका प्रशिक्षक यर्गन क्लप र ब्राजिलियन विंगर रोबर्टो फर्मिनोले पनि एलिसनसँग कुरा गरेर उनलाई एनफिल्ड ल्याउन राजी गराएका थिए ।
एलिसन सन् २०१६ मा मात्र ७.५ मिलियन युरोमा रोमामा आवद्ध भएका थिए । उनले रोमामा पहिलो सिजन दोस्रो रोजाईको गोलरक्षकका रुपमा बिताए र एक खेल पनि खेल्न पाएनन् । यद्यपि पछिल्लो सिजन रोमाका पहिलो रोजाईका गोलरक्षक वोईशेक शिज्नी युभेन्ट्सतर्फ लागेपछि एलिसन रोमाको पहिलो रोजाईका गोलरक्षक बने र उनले क्लबलाई च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलसम्म पुराए ।
← चेल्सीका नयाँ प्रशिक्षक भन्छन् “ट्रान्सफर मार्केटसँग मतलब छैन” आर्सनलमा २२ बर्ष बिताउनु मेरो करियरकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती : वेंगर →